မိန်းကလေးများ အထင်သေး ရှောင်ပြေးရတဲ့ Online ပေါ်က ယောက်ျား မဖြစ်ရအောင် – Gentleman Magazine
အခုအခါ လူတိုင်း အွန်လိုင်းတက် ကြူကြူခင်းနေကြပြီ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ငြင်းစရာမလုို သွေးထွက်အောင်မှန်တာ အထွေ အထူးပြောစရာလိုမယ်မဟုတ်ပါဘူး။ မိန်းကလေး အလန်းလေးတွေ အင်တာနက်ပေါ် တက်ပြီး ချစ်သူ ဘဝလက်တွဲဖော် ရှာ နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်လဲ ကံကောင်းထောက်မစွာ သူတုို့လေးတွေ နဲ့ ရေစက်ဆုံ ဇာက်လမ်းခင်း နို်င်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်းမှာ မနူးမနပ် ယောက်ျားလေးတွေ လုပ်တက်တဲ့ အမှားတွေ ကို လုပ်မိနေတယ်ဆိုရင် သူတို့ နဲ့ ဆုံဖို့ဆိုတာထက် သူတို့က ကိုယ့်ကို ဖုတ်လေတဲ့ ငပိရှိတယ်လို့ထောင် ထင်မှာမဟုတ်တဲ့ အတွက် ကြိုတင် ရှောင်ထားလို့ရအောင် ဖောက်သည်ချပေးလိုက်ပါတယ်။
လူပျို ယောကျာ်းလေးတိုင်းလိုလိုအွန်လိုင်းပေါ်တက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တက်ပြီး အချစ်ရှာဖွေနေတဲ့ အချိန်မှာ တချို့တွေက ကိုယ့်ထက် ရုပ်သားနားမယ် . အချို့တွေက ပိုအောင်မြင်မှု ရှိမယ် ဆိုတာ ရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ပိုတော်. ပိုချော. ပိုခန့် ပိုတက်. တဲ့သူတွေတောင် ဖေ့ဘွတ် အကောင့် အဂွမ်းတွေ နဲ့ မြင်မြင်သမျှ ဆော်တွေ ကျော်ကျော်သွားတာ အများကြီးပါ။ အဲဒီလိုပဲ . သာမန် ယောကျာ်းလေး တွေက သူတို့ အကောင့်ကို အလန်းစားတင်ထားတဲ့ တော်ကီကောင်းတဲ့ အတွက် မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတာ ကြွေတာ တွေလဲ ဒုနဲ့ဒေးပါ။
သတင်းကောင်းကတော့ အွန်လိုင်း ဖွန်လိုင်း မှာ ကိုယ့်မျက်နှာပန်းလှဖို့အတွက်အတွက်ရော. ကိုယ့်လိုလူမျိုးကို ရှာနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ မျက်နှာကို ထောင်ထားပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်တွေကို လုိုက်နာလိုက်ရင် ဆော်ကြည်ဘဲ ဖြစ်လာမှပါ။
၁။ ဓာတ်ပုံ အဂွမ်း တွေ မသုံးပါနဲ့
ပုံတုံးတယ် ဆိုတာကိုက အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးကို ဓာတ်ပုံ အဂွမ်းအကြောင်း တွေပဲ ပြောသွားရင်တောင် ရပါတယ်။ Selfie ဆိုတာမိန်းကလေးတွေရိုက်ရင် လှတယ် .မိန်းကလေးတွေ စကတ်တိုဝတ်သလိုမျိုး . ယောကျာ်းလေး စကတ်ဝတ်ရင်လှလား ? Selfie အကြောင်းတွေပဲ ပြောရင်တောင်ကုန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လိုက်နာလို့ရအောင် အတိုချုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။
မှန်ရှေ့ Selfie – Selfie သိပ်သိပ်ပြီး ဆွဲချင်နေတယ် တားလို့မရဘူး ဆိုရင် တောင် ပုံမှန် Selfie ပဲရိုက်လိုက်ပါ။
အင်္ကျီချွတ် Selfie – မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေး တောင့်တယ်ဆိုတာ သဘောကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရှက်မရှိ လူတကာ မြင်အောင်ပြတာကို တော့ မကြိုက်တက်ကြပါဘူး။ ဒါက အပြင်မှာ ကမ်းခြေသွားတဲ့ အချိန်တို့ . နှစ်ယောက်ထဲတွေ့တဲ့ အချန်တွေ အတွက် ချိန်ထားလိုက်ပါ။
ရေချိုးခန်း Selfie – ရေချိုးခန်းထဲ အင်္ကျီချွတ်ပြီး ရုိုက်ထားတဲ့ပုံ အွန်လိုင်း အကောင့်ပေါ်တင်မိပြီဆိုတာနဲ့ မိန်းကလေးတွေ သွားရည်ကျပြီး ကြွေပြီး စကားလာပြောမယ်ထင်နေရင် ကိုယ့် ကိုယ်ဟာကိုယ် နားရင်းရုိုက်ပြီး အိပ်မက် မက်နေတာက နိုးသွားအောင်အရင်လုပ်ပါ။
ကွန်ပြူတာ Selfie – (အင်တာနက်ဆိုင်) ကွန်ပြူတာ ကင်မရာနဲ့ ရိုက်သမျှပုံ ဘယ်ပုံ က ကြည့်ကောင်းတာရှိလဲ။ ဝါးတားတားနဲ့ အလင်းမမှန်တာနဲ့ . နားကြပ်ကြီးကားယားနဲ့ . ဆက်ပြောစရာမလုိုဘူးထင်ပါတယ်။
Selfie ဘဲ – ကိုယ်တင်တဲ့ ပုံတိုင်းက Selfie ဖြစ်နေတယ်ဆို . မိန်းကလေးတွေက တွေးမှာပဲ. ဒီဘဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးမယ့် ဘော်ဒါတောင်မရှိဘူး . ဘာကြောင့် ခင်ချင်စရာကောင်းမလဲဆိုတာကို ပေါ့။
ကြိုးချည်ထားတဲ့ တောရိုင်းကောင် နဲ့ ကပ်ရိုက်တဲ့ ပုံ – အဲဒီအကောင်က ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မွေးထားတာ. ဒါမှမဟုတ်အမဲလိုက်လို့ရတာဆို ရင်ရုိုက်ပါ။ တခြားဆိုရင် ဘာမှ အထင်ကြီးစရာကိုမရှိတာပါ။ ကြိုးချည်ထားတဲ့ ယဉ်နေတဲ့ တောရိုင်းကောင်ဘေး ဓာတ်ပုံရုိုက်လို့ ဘယ်သူကမှ လာပြီး လူစွမ်းကောင်းလို့မထင်ပါဘူး . သူရဲဘော ကြောင်တယ် အထင်မခံရရင်ကံကောင်း ။
သင့်ကား နှင့် တွဲရိုက်တဲ့ပုံ – ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ . ငွေအပုံလုိုက်နဲ့ ရိုက်တာတွေအကုန်ပါပါတယ်။ ဘယ်လို အကြွားသန်တယ်ဆိုတာက အစ အဲမှာစပေါ်နေပါပြီ။ ငွေမမက် တဲ့ တန်ဖိုး ရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေ ကတော့ သင့်ကို မရင့်ကျက်သေးနဲ့ ငကြွားလေးလို့ထင်သွားမှာပါ။
ခပ်တည်တည်ပုံ – ပါးစပ် နားရွက်တက်ချိတ်နေရမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ မှတ်ပုံတင် ဓာတ်ပုံမှမဟုတ်တာ . နဲနဲ တော့ ပြုံးပြသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်က ပျော်တက်တယ် ခင်ဖို့ကောင်းတယ် ဆိုတာကို ခပ်တည်တည် နေလို့ကတော့ ဘယ်သူကလာယုံမှာလဲ။
အခြားကောင်မလေးတွေနဲ့ပုံ – သူက ညီမလား အမလား . သူငယ်ချင်းလား. ကြူကြူခင်းနေတဲ့ သူလား . ရည်းစားဟောင်းလား. ဒါမျိုး ကိုကြိုက်တက်တာလား . . . အဲဒီလောက်နဲ့ တင် တော်ရုံ မိန်းကလေးက တကူးတက ဘာလဲ မမေးတော့ပဲ သင့်ကို အဖတ်လုပ်တော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး .
တခြား ဘဲတွေနဲ့ပုံ – ဘယ်သူက ကိုယ်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ရှင်းပြတာက သူစကားပြန်ပြောမှဖြစ်တာလေ။ နဂိုထဲက ကိုယ်က ဘယ်သူလဲ သူမသိရင် ဘယ်ကလာပြီး စကားပြန်ပြောမှာလဲ။ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။
တခြား ပုံ – သူများပုံ. မင်းသားပုံ. အကောင်ပုံ. ဘာညာသာတကာ ပုံ အကုန်ပါ ပါတယ်။ ဒါကတော့ အဆိုးတက အဆိုးဆုံးထဲ က အဆိုးဆုံးပါ။ ကိုယ့်မျက်နှာကို ကိုယ်မပြရဲလောက်အောင် ဘာတွေဖြစ်နေလဲ မိန်းကလေးတွေတွေးမိမှာပါ။ သေချာတာက တော့ ၉၉. ၉၉ % ကတော့ သိပ်ချောသိပ်ခန့် သိပ်ဖြောင့် နေတာ မဟုတ်တာပါပဲ။ ဘယ်အတိုင်းအတာ ထိရုပ်ဆိုး လို့မပြရဲရတာလဲ ဘယ်က ဒုစရုိုက် မဒိန်းကောင်လဲ ပဲထင်ကြမှာ အသေအချာပါ။
၂။ နာမည် တလွဲ နဲ့ အကောင့်
ငယ်နာမည်တွေ ဘာတွေ . သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်တဲ့ နာမည် သုံးတာ ကတော့ ရပါတယ်။ နာမည်လိမ်ထားတာက သူများ ပုံသုံး နဲ့ အတူတူပါပဲ။ အွန်လို်င်းမှာ တော့ နာမည်က ကိုအမျိုးမျိုး . နာမည် အရင်းက ခွေးသူခိုး။ မိန်းကလေးတွေက ထင်မှာပဲ . ကိုယ့်နာမည် မသိစေချင်ရအောင် ဘယ်က ဒုစရိုက်ကောင်လဲ၊ ကလေးအဖေလဲ၊ ထင်ကြမှာပဲလေ။ အစကထဲကို က ရိုးရိုးသားသား နေတာမှ နောက်လဲ ရှင်းပြစရာမလိုတော့ဘူးလေ။
၃။ အူကြောင်ကြောင် Chat တွေသွားမပို့ပါနဲ့
အွန်လိုင်းမှာ သွား ချက်ရင် ချောတဲ့ မိန်းကလေးတွေမှာ ကိုယ့်လို ကောင်တွေ သွားရည်တများများ နဲ့ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတယ် ဝင်ကြူနေတယ် ဆိုတာ သတိရလိုက်ပါ။ အများသောအားဖြင့်
– Hi ဟိုင်း
– စားပြီး သွားပြီလား
– ခင်ချင်လို့ ရမလား
– စကား ပြန်ပြောပါအုံး
– အရမ်း ကြီးကျယ်တာပဲ
– ချစ်စရာ ကောင်းတယ်နော်
– ကြွေနေပြီ ကလေးရယ်
ကိုယ့် အကောင့်က ပုံကလန်းတယ်ထား . ဒါမျိုးတွေသွားပြောလို့က ဂွမ်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က သူဘာပြန်ပြော လေမလဲ ဟိုင်းလုိုက်တာ . အတွေးနဲနဲ တောင်မထည့်ပဲ ဟိုင်းလိုက်ရင် သူအထင် အူကြောင်ကြောင်လာလုပ်နေတာပဲ ဆုိုပြီး စကားပြန်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာ ကိုယ် တန်ဖိုးထားတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆို ဘာမှ ပြန်ပြောမှာကို မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကြောင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဟုိုင်း တင်မရပ် ပဲ သူ့ အကောင့်ထဲ က ပုံတွေကြည့်ပြီး ဇာတ်လမ်းခင်းသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ ။ ကမ်းခြေ သွားတဲ့ပုံတွေ့ရင် . ကမ်းစပ် ကအရမ်း သာယာလှပတာပဲ . အဲဒါ ဘယ်ကမ်း ခြေလဲ။ ဘယ်တုန်းကသွားတာလဲ။ တစ်နှစ် ဘယ်နှစ်ခောက် ရောက်ဖြစ်လဲ . ဘာလဲညာလဲပေါ့။
(မပြောတက်ရင် Gentleman Magazine တင်သမျှဖတ်ဗျာ)
ဘာမှ မပြော တက်ရင်တောင် . ဟေး . ဆိုတာထက် ဟေး အခုတလော ဘာတွေလှုပ်ရှားနေလဲ . ဆိုတာက ပို ကောင်းပါတယ်။
၄။ မရင့် ပါနဲ့ . မစပ်စုပါနဲ့
လိင်ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်တာသွားပြောတာ တွေက လုံးဝလက်ခံလို့မရတာ Gentleman Magazine ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတော့ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေ အရ သံတိုင်ကြားရောက်သွားမယ်ဆိုတာ သတိရပါ။ သင့် အကောင့် အတု၊ ပုံအတု ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး လူပါးဝမနေပါနဲ့။ သင်သုံးနေတဲ့ ဖုန်း. ကွန်ပြူတာ မှာ မှတ်ပုံတင် နံပတ်ရှိပြီး အဲဒီကနေ နောက်ကြောင်းခံဖမ်းလို့ရတယ်ဆိုတာကို သိထားပါ။ ယောက်ျားကောင်းတွေက အစ လုပ်မိတဲ့ အမှာတချို့ ကို ရှောင်လို့ရအောင် ဖော်ပြပေလုိုက်ပါတယ်။
သူစကားပြန်မပြောတာ – စာမပြန်တာက သူ့ဆီမှာ ပြန်စရာ အရမ်းများနေတာ၊ အလုပ်ရှုပ်နေတာ အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တောက်လျှောက် စာမပြန်မချင်းပို့ နေလို့ကတော့ သူ့အနေနဲ့ Unfriend နဲ့ Block လုပ်တာက လွယ်လွယ်လေးဆုိုတာသိထားပါ။
ကိုယ်က တအားစပ်စုတာ – ကိုယ့်အထင်ကတော့ ခင်ချင်လို့ စကားဆက်ပြောရအောင်မေးတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူ့အမြင်မှာက အပြင်မှာတောင် မသိမခင်သေးပဲ သူ့ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ တွေသွားစပ်စုနေပြီ ဆိုရင် သူ့လုံခြုံမှုအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာမှာပါ။
အချုပ်အားဖြင့် အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ အွန်လိုင်းပေါ်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိသမျှ နိုင်ငံ ပေါင်းစုံကလူတွေကို အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်လို့ရနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်မှန်ကန်န် အသုံးချတက်ရင် အချစ်စစ် ကိုရှာဖွေဖို့ အရမ်းလွယ်ကူနေပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆို တော့ ကိုယ်က နည်းမှန်လမ်းမှန်သုံးနည်းကို အနည်းငယ်အားထုတ်လေ့လာလိုက်ရင်ကို သေသေချာချာ မသုံးတက်တဲ့ ရမ်းတီးတွေ အများကြီး ကြားထဲ အနူတောထဲက လူချောဖြစ်နေမှာပါ။
အောင်မြင်ပါစေ . အချစ်စစ်တွေ့ ပါစေ။
မိနျးကလေးမြား နှာခေါငျးရှုံ့ရတဲ့ Online ပျေါက ယောကျြားလေးမြား
အခုအခါ လူတိုငျး အှနျလိုငျးတကျ ကွူကွူခငျးနကွေပွီ ဖွဈတယျဆိုတာ ငွငျးစရာမလုို သှေးထှကျအောငျမှနျတာ အထှေ အထူးပွောစရာလိုမယျမဟုတျပါဘူး။ မိနျးကလေး အလနျးလေးတှေ အငျတာနကျပျေါ တကျပွီး ခဈြသူ ဘဝလကျတှဲဖျော ရှာ နကွေတဲ့ အခြိနျမှာ ကိုယျလဲ ကံကောငျးထောကျမစှာ သူတုို့လေးတှေ နဲ့ ရစေကျဆုံ ဇာကျလမျးခငျး နျိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အှနျလိုငျးမှာ မနူးမနပျ ယောကျြားလေးတှေ လုပျတကျတဲ့ အမှားတှေ ကို လုပျမိနတေယျဆိုရငျ သူတို့ နဲ့ ဆုံဖို့ဆိုတာထကျ သူတို့က ကိုယျ့ကို ဖုတျလတေဲ့ ငပိရှိတယျလို့ထောငျ ထငျမှာမဟုတျတဲ့ အတှကျ ကွိုတငျ ရှောငျထားလို့ရအောငျ ဖောကျသညျခပြေးလိုကျပါတယျ။
လူပြို ယောကျြားလေးတိုငျးလိုလိုအှနျလိုငျးပျေါတကျ ဖဘှေ့တျ ပျေါတကျပွီး အခဈြရှာဖှနေတေဲ့ အခြိနျမှာ တခြို့တှကေ ကိုယျ့ထကျ ရုပျသားနားမယျ . အခြို့တှကေ ပိုအောငျမွငျမှု ရှိမယျ ဆိုတာ ရှိပွီးသားပါ။ ဒါပမေယျ့ ပိုတျော. ပိုခြော. ပိုခနျ့ ပိုတကျ. တဲ့သူတှတေောငျ ဖဘှေ့တျ အကောငျ့ အဂှမျးတှေ နဲ့ မွငျမွငျသမြှ ဆျောတှေ ကြျောကြျောသှားတာ အမြားကွီးပါ။ အဲဒီလိုပဲ . သာမနျ ယောကျြားလေး တှကေ သူတို့ အကောငျ့ကို အလနျးစားတငျထားတဲ့ တျောကီကောငျးတဲ့ အတှကျ မိနျးကလေးတှေ စိတျဝငျစားတာ ကွှတော တှလေဲ ဒုနဲ့ဒေးပါ။
သတငျးကောငျးကတော့ အှနျလိုငျး ဖှနျလိုငျး မှာ ကိုယျ့မကျြနှာပနျးလှဖို့အတှကျအတှကျရော. ကိုယျ့လိုလူမြိုးကို ရှာနတေဲ့ မိနျးကလေးတှေ မကျြနှာကို ထောငျထားပွီး အောကျဖျောပွပါ အခကျြအလကျတှကေို လုိုကျနာလိုကျရငျ ဆျောကွညျဘဲ ဖွဈလာမှပါ။
၁။ ဓာတျပုံ အဂှမျး တှေ မသုံးပါနဲ့
ပုံတုံးတယျ ဆိုတာကိုက အမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။ ဒီဆောငျးပါးတဈခုလုံးကို ဓာတျပုံ အဂှမျးအကွောငျး တှပေဲ ပွောသှားရငျတောငျ ရပါတယျ။ Selfie ဆိုတာမိနျးကလေးတှရေိုကျရငျ လှတယျ .မိနျးကလေးတှေ စကတျတိုဝတျသလိုမြိုး . ယောကျြားလေး စကတျဝတျရငျလှလား ? Selfie အကွောငျးတှပေဲ ပွောရငျတောငျကုနျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ လိုကျနာလို့ရအောငျ အတိုခြုပျပေးလိုကျပါမယျ။
မှနျရှေ့ Selfie – Selfie သိပျသိပျပွီး ဆှဲခငျြနတေယျ တားလို့မရဘူး ဆိုရငျ တောငျ ပုံမှနျ Selfie ပဲရိုကျလိုကျပါ။
အင်ျကြီခြှတျ Selfie – မိနျးကလေးတှကေ ယောကျြားလေး တောငျ့တယျဆိုတာ သဘောကပြါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရှကျမရှိ လူတကာ မွငျအောငျပွတာကို တော့ မကွိုကျတကျကွပါဘူး။ ဒါက အပွငျမှာ ကမျးခွသှေားတဲ့ အခြိနျတို့ . နှဈယောကျထဲတှတေဲ့ အခနျြတှေ အတှကျ ခြိနျထားလိုကျပါ။
ရခြေိုးခနျး Selfie – ရခြေိုးခနျးထဲ အကငြ်ျီခြှတျပွီး ရုိုကျထားတဲ့ပုံ အှနျလိုငျး အကောငျ့ပျေါတငျမိပွီဆိုတာနဲ့ မိနျးကလေးတှေ သှားရညျကပြွီး ကွှပွေီး စကားလာပွောမယျထငျနရေငျ ကိုယျ့ ကိုယျဟာကိုယျ နားရငျးရုိုကျပွီး အိပျမကျ မကျနတောက နိုးသှားအောငျအရငျလုပျပါ။
ကှနျပွူတာ Selfie – (အငျတာနကျဆိုငျ) ကှနျပွူတာ ကငျမရာနဲ့ ရိုကျသမြှပုံ ဘယျပုံ က ကွညျ့ကောငျးတာရှိလဲ။ ဝါးတားတားနဲ့ အလငျးမမှနျတာနဲ့ . နားကွပျကွီးကားယားနဲ့ . ဆကျပွောစရာမလုိုဘူးထငျပါတယျ။
Selfie ဘဲ – ကိုယျတငျတဲ့ ပုံတိုငျးက Selfie ဖွဈနတေယျဆို . မိနျးကလေးတှကေ တှေးမှာပဲ. ဒီဘဲ ဓာတျပုံရိုကျပေးမယျ့ ဘျောဒါတောငျမရှိဘူး . ဘာကွောငျ့ ခငျခငျြစရာကောငျးမလဲဆိုတာကို ပေါ့။
ကွိုးခညျြထားတဲ့ တောရိုငျးကောငျ နဲ့ ကပျရိုကျတဲ့ ပုံ – အဲဒီအကောငျက ကိုယျကိုယျတိုငျမှေးထားတာ. ဒါမှမဟုတျအမဲလိုကျလို့ရတာဆို ရငျရုိုကျပါ။ တခွားဆိုရငျ ဘာမှ အထငျကွီးစရာကိုမရှိတာပါ။ ကွိုးခညျြထားတဲ့ ယဉျနတေဲ့ တောရိုငျးကောငျဘေး ဓာတျပုံရုိုကျလို့ ဘယျသူကမှ လာပွီး လူစှမျးကောငျးလို့မထငျပါဘူး . သူရဲဘော ကွောငျတယျ အထငျမခံရရငျကံကောငျး ။
သငျ့ကား နှငျ့ တှဲရိုကျတဲ့ပုံ – ပိုငျဆိုငျမှုတှေ . ငှအေပုံလုိုကျနဲ့ ရိုကျတာတှအေကုနျပါပါတယျ။ ဘယျလို အကွှားသနျတယျဆိုတာက အစ အဲမှာစပျေါနပေါပွီ။ ငှမေမကျ တဲ့ တနျဖိုး ရှိတဲ့မိနျးကလေးတှေ ကတော့ သငျ့ကို မရငျ့ကကျြသေးနဲ့ ငကွှားလေးလို့ထငျသှားမှာပါ။
ခပျတညျတညျပုံ – ပါးစပျ နားရှကျတကျခြိတျနရေမယျ မဟုတျပါဘူး။ မှတျပုံတငျ ဓာတျပုံမှမဟုတျတာ . နဲနဲ တော့ ပွုံးပွသငျ့ပါတယျ။ ကိုယျက ပြျောတကျတယျ ခငျဖို့ကောငျးတယျ ဆိုတာကို ခပျတညျတညျ နလေို့ကတော့ ဘယျသူကလာယုံမှာလဲ။
အခွားကောငျမလေးတှနေဲ့ပုံ – သူက ညီမလား အမလား . သူငယျခငျြးလား. ကွူကွူခငျးနတေဲ့ သူလား . ရညျးစားဟောငျးလား. ဒါမြိုး ကိုကွိုကျတကျတာလား . . . အဲဒီလောကျနဲ့ တငျ တျောရုံ မိနျးကလေးက တကူးတက ဘာလဲ မမေးတော့ပဲ သငျ့ကို အဖတျလုပျတော့မှာ မဟုတျတော့ပါဘူး .
တခွား ဘဲတှနေဲ့ပုံ – ဘယျသူက ကိုယျဖွဈတယျ ဆိုတာ ရှငျးပွတာက သူစကားပွနျပွောမှဖွဈတာလေ။ နဂိုထဲက ကိုယျက ဘယျသူလဲ သူမသိရငျ ဘယျကလာပွီး စကားပွနျပွောမှာလဲ။ စဉျးစားကွညျ့ကွပါ။
တခွား ပုံ – သူမြားပုံ. မငျးသားပုံ. အကောငျပုံ. ဘာညာသာတကာ ပုံ အကုနျပါ ပါတယျ။ ဒါကတော့ အဆိုးတက အဆိုးဆုံးထဲ က အဆိုးဆုံးပါ။ ကိုယျ့မကျြနှာကို ကိုယျမပွရဲလောကျအောငျ ဘာတှဖွေဈနလေဲ မိနျးကလေးတှတှေေးမိမှာပါ။ သခြောတာက တော့ ၉၉. ၉၉ % ကတော့ သိပျခြောသိပျခနျ့ သိပျဖွောငျ့ နတော မဟုတျတာပါပဲ။ ဘယျအတိုငျးအတာ ထိရုပျဆိုး လို့မပွရဲရတာလဲ ဘယျက ဒုစရုိုကျ မဒိနျးကောငျလဲ ပဲထငျကွမှာ အသအေခြာပါ။
၂။ နာမညျ တလှဲ နဲ့ အကောငျ့
ငယျနာမညျတှေ ဘာတှေ . သူငယျခငျြးတှေ ချေါတဲ့ နာမညျ သုံးတာ ကတော့ ရပါတယျ။ နာမညျလိမျထားတာက သူမြား ပုံသုံး နဲ့ အတူတူပါပဲ။ အှနျလျိုငျးမှာ တော့ နာမညျက ကိုအမြိုးမြိုး . နာမညျ အရငျးက ခှေးသူခိုး။ မိနျးကလေးတှကေ ထငျမှာပဲ . ကိုယျ့နာမညျ မသိစခေငျြရအောငျ ဘယျက ဒုစရိုကျကောငျလဲ၊ ကလေးအဖလေဲ၊ ထငျကွမှာပဲလေ။ အစကထဲကို က ရိုးရိုးသားသား နတောမှ နောကျလဲ ရှငျးပွစရာမလိုတော့ဘူးလေ။
၃။ အူကွောငျကွောငျ Chat တှသှေားမပို့ပါနဲ့
အှနျလိုငျးမှာ သှား ခကျြရငျ ခြောတဲ့ မိနျးကလေးတှမှော ကိုယျ့လို ကောငျတှေ သှားရညျတမြားမြား နဲ့ ဝိုငျးဝိုငျးလညျနတေယျ ဝငျကွူနတေယျ ဆိုတာ သတိရလိုကျပါ။ အမြားသောအားဖွငျ့
– Hi ဟိုငျး
– စားပွီး သှားပွီလား
– ခငျခငျြလို့ ရမလား
– စကား ပွနျပွောပါအုံး
– အရမျး ကွီးကယျြတာပဲ
– ခဈြစရာ ကောငျးတယျနျော
– ကွှနေပွေီ ကလေးရယျ
ကိုယျ့ အကောငျ့က ပုံကလနျးတယျထား . ဒါမြိုးတှသှေားပွောလို့က ဂှမျးသှားပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျက သူဘာပွနျပွော လမေလဲ ဟိုငျးလျုိုကျတာ . အတှေးနဲနဲ တောငျမထညျ့ပဲ ဟိုငျးလိုကျရငျ သူအထငျ အူကွောငျကွောငျလာလုပျနတောပဲ ဆုိုပွီး စကားပွနျပွောမှာမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ဟာ ကိုယျ တနျဖိုးထားတဲ့ တနျဖိုးရှိတဲ့ မိနျးကလေးတှဆေို ဘာမှ ပွနျပွောမှာကို မဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကွောငျခငျြတယျဆိုရငျ ဟုိုငျး တငျမရပျ ပဲ သူ့ အကောငျ့ထဲ က ပုံတှကွေညျ့ပွီး ဇာတျလမျးခငျးသငျ့ပါတယျ။ ဥပမာ ။ ကမျးခွေ သှားတဲ့ပုံတှရေ့ငျ . ကမျးစပျ ကအရမျး သာယာလှပတာပဲ . အဲဒါ ဘယျကမျး ခွလေဲ။ ဘယျတုနျးကသှားတာလဲ။ တဈနှဈ ဘယျနှဈခောကျ ရောကျဖွဈလဲ . ဘာလဲညာလဲပေါ့။
(မပွောတကျရငျ Gentleman Magazine တငျသမြှဖတျဗြာ)
ဘာမှ မပွော တကျရငျတောငျ . ဟေး . ဆိုတာထကျ ဟေး အခုတလော ဘာတှလှေုပျရှားနလေဲ . ဆိုတာက ပို ကောငျးပါတယျ။
၄။ မရငျ့ ပါနဲ့ . မစပျစုပါနဲ့
လိငျကိစ်စနဲ့ ပကျသကျတာသှားပွောတာ တှကေ လုံးဝလကျခံလို့မရတာ Gentleman Magazine ပရိတျသတျတဈယောကျဖွဈနတေော့ သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ အီလကျထရောနဈဥပဒေ အရ သံတိုငျကွားရောကျသှားမယျဆိုတာ သတိရပါ။ သငျ့ အကောငျ့ အတု၊ ပုံအတု ဖွဈတယျဆိုပွီး လူပါးဝမနပေါနဲ့။ သငျသုံးနတေဲ့ ဖုနျး. ကှနျပွူတာ မှာ မှတျပုံတငျ နံပတျရှိပွီး အဲဒီကနေ နောကျကွောငျးခံဖမျးလို့ရတယျဆိုတာကို သိထားပါ။ ယောကျြားကောငျးတှကေ အစ လုပျမိတဲ့ အမှာတခြို့ ကို ရှောငျလို့ရအောငျ ဖျောပွပလေုိုကျပါတယျ။
သူစကားပွနျမပွောတာ – စာမပွနျတာက သူ့ဆီမှာ ပွနျစရာ အရမျးမြားနတော၊ အလုပျရှုပျနတော အမြားကွီးဖွဈနိုငျပါတယျ။ တောကျလြှောကျ စာမပွနျမခငျြးပို့ နလေို့ကတော့ သူ့အနနေဲ့ Unfriend နဲ့ Block လုပျတာက လှယျလှယျလေးဆုိုတာသိထားပါ။
ကိုယျက တအားစပျစုတာ – ကိုယျ့အထငျကတော့ ခငျခငျြလို့ စကားဆကျပွောရအောငျမေးတယျပေါ့။ ဒါပမေယျ့ သူ့အမွငျမှာက အပွငျမှာတောငျ မသိမခငျသေးပဲ သူ့ကိုယျရေး ကိုယျတာ တှသှေားစပျစုနပွေီ ဆိုရငျ သူ့လုံခွုံမှုအတှကျ စိုးရိမျစရာဖွဈလာမှာပါ။
အခြုပျအားဖွငျ့ အငျတာနကျခတျေကွီးမှာ အှနျလိုငျးပျေါက ကမ်ဘာပျေါမှာ ရှိသမြှ နိုငျငံ ပေါငျးစုံကလူတှကေို အလှယျတကူ ခြိတျဆကျလို့ရနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ မှနျမှနျကနျနျ အသုံးခတြကျရငျ အခဈြစဈ ကိုရှာဖှဖေို့ အရမျးလှယျကူနပေါပွီ။ ဘာကွောငျ့လဲဆို တော့ ကိုယျက နညျးမှနျလမျးမှနျသုံးနညျးကို အနညျးငယျအားထုတျလလေ့ာလိုကျရငျကို သသေခြောခြာ မသုံးတကျတဲ့ ရမျးတီးတှေ အမြားကွီး ကွားထဲ အနူတောထဲက လူခြောဖွဈနမှောပါ။
အောငျမွငျပါစေ . အခဈြစဈတှေ့ ပါစေ။
Previous: ယောင်ခြောက်ဆယ် ဖြစ်နေရင် ဒါကိုဖတ်ပါ
Next: သင့်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို အခြားသူတွေအကဲဖြတ်နိုင်သည့် လုပ်ရပ်များ